Shiinaha gogosha sagxadda vinylalkohol saaraha & Alaab-qeybiye | Karlter
sagxad sagxad ah oo vinylalkohol ah
Shayga: Tayada Sare 5mm Dhumuc Laydh Dabacsan Gogosha Vinyl
Damaanad In ka badan 6 sano
Ka dib iibinta Adeegga Taageero farsamo oo khadka tooska ah ah
Magaca Sumadda Maya
Faa'iidada Biyo ma galeen
Daaweynta dusha sare Dahaarka UV
Nooca Badeecada Loose lay Vinyl Plank
Oogada qoto dheer xardho / gacanta la xoqay
Rakibaadda Loose jiifay
Xiro Lakabka 0.3 / 0,5 mm
Cabir 9 "x48"
Shahaadooyinka CE / SGS
Xirxirida Kartoon + sariirtaada
Halkee loo isticmaali karaa Loose Lay?
Jikada, musqusha, fadhiga, qolka jimicsiga, hoolka, qolka jiifka, waxbarashada iyo qeybta hoose
Si dhakhso ah oo fudud loo rakibo
Loose Lay ayaa si fudud u rakibaya dabaqyada hoose ee siman, siman, qalalan iyo boodhka. Loose laydinka sagxadda vinylka ayaa soosaaray si loo yareeyo waqtiga rakibidda loona oggolaado marinnada korontada dhulka hoostiisa mara. Xaaladaha saxda ah awgood waxaa lagu dhejin karaa sagxadda dhulka hoostiisa iyada oo aan wax xabag ah lagu dhejin. Tani waxay gacan ka geysaneysaa sidii looga dhigi lahaa xulasho rakibid fudud oo qof walba iyo qof walba.
Loose Lay Vinyl Planks waa leydi aad u ballaadhan oo vinylalkohol ah oo leh taageero caag ah oo sagxad siman ku yaal.
Maxaa ka dhiga Loose Lay Vinyl Planks oo ka duwan waxyaabaha kale waa inaysan u baahnayn dhejiyeyaasha, dhejiska, ama carrabka iyo qaababka jeexitaanka si loo xajiyo looxyada meesha. Alwaaxa leydiinka leyliga ah ee vinyl-ka qaro weyn waxay ku jiifayaan sagxad dhulka ah waxayna ku sii negaan doonaan markii la rakibo.
Noocan Vinyl sagxad ah waxaa la dul saari karaa sagxadda hadda jirta si fudud oo dhakhso leh.
Nidaamka Rakibaadda Loose Vinyl Plank
Dhabarka Loose Lay Vinyl Planks waxay adeegsadaan isku dhac si ay u helaan qabsashada sagxadda hoosteeda. Dabaqa hoose wuxuu u baahan yahay in la diyaariyo oo waa inuu ahaadaa mid qalalan, siman, siman, nadiif ah, oo aan lahayn boodh. Rakibayaashu waxay u baahan yihiin oo keliya inay dejiyaan Loose Lay Vinyl Gogosha oo ay hubiyaan inuu jiro cidhiidhi adag oo u dhexeeya mid kasta oo looxa iyo darbiga ah.
Goynta looxyada si loo hubiyo in qaybaha ugu dambeeya ay ku habboon yihiin ayaa loo baahan doonaa in la sameeyo. Si kastaba ha noqotee, looma baahna tababar gaar ah oo sidaas lagu sameeyo.
Faa'iidooyinka Looks Lay Vinyl Loose
Loose Lay Vinyl Flooring waxay noqoneysaa xulasho caan ah sababo la xiriira tirada rafcaanka ee faa'iidooyinka ay bixiso.
Sidaan soo sheegnay, gogosha noocan ah waa mid aad u fudud in la rakibo. Looma baahna koolo, qabatooyin, ama nidaam riix-quful. Rakibayaashu waxay si fudud u dejinayaan looxyada booska. Fududeynta rakibida, waqti badan kuma qaadato in shaqada la dhameystiro waana wax caadi ah in la bixiyo wax kayar natiijada.
Muujinta kale ee xalka sagxadda dhulka ayaa ah in la qaadi karo. Waa laga saari karaa oo dib loogu rakibi karaa meel kale si fudud. Inta badan xalka kale ee sagxadda dhulka laguma bixiyo dheeftan.
Haysashada ikhtiyaarkan waxay ka dhigan tahay inaad u wareejin karto looxyadan qollo kala duwan ama aad qaadan karto sagxadda dhulka haddii aad guureysid guryaha, abuurista fursado badan oo naqshad gudaha ah iyo inay kuu badbaadin karto lacag muddada dheer.
Hore: ku dheji dabaqa vinylka
dhagsii qufulka vinylka qufulka
12.0mm sagxadda dhulka laminate
EIR SPC gogosha vinylalkohol
4.0mm5.0mm dhagsii vinyl
5.0mm SPC gogosha vinylalkohol
8.0mm sagxadda dhulka laminate